ICloud komputa ndiko kuwanikwa kwemacomputer services pamusoro peInternet. Aya masevhisi anotangira kubva padanho repamusoro zvigadzirwa kuti apedze SaaS (Software seSevhisi) mhinduro. Cloud sevhisi vanopa vanobatsira mabhizinesi kutarisisa pane avo epamoyo zviitiko nekubata zvese zvivakwa zvinodiwa. Nhasi, vanhu vazhinji vanokwanisa kuwana imwe nzira yegore mhinduro senge maemail, mitambo, mafirimu, mimhanzi, mifananidzo, zvinyorwa, unozvitumidza. Huwandu hwemasevhisi anowanikwa pagore hwakawanda. Cloud mhinduro vari kukurumidza kuve sarudzo yakasarudzika yemabhizinesi ari kutarisa swathe yecomputer zvinodiwa. Iri sevhisi rinoshanduka rakachinja gore kadambari mune mhinduro yakanaka kune ese mabhizinesi uye vanhu.